Ukushintsha amagama wokuqala | Law & More BV
Blog » Ukushintsha amagama wokuqala
Ukushintsha amagama wokuqala
Ngokuyinhloko, abazali bakhululekile ukukhetha igama elilodwa noma ngaphezulu izingane zabo. Kodwa-ke, ekugcineni kungenzeka ungagculiseki ngegama lokuqala elikhethiwe. Ngabe ufuna ukushintsha igama lakho noma le lengane yakho? Ngemuva kwalokho udinga ukubheka izinto eziningi ezibalulekile. Ngemuva kwakho konke, ukuguqulwa kwegama lokuqala "akunakwenzeka" nje.
Okokuqala, udinga isizathu esizwakalayo sokushintsha igama lokuqala, njengokuthi:
Ukutholwa noma ukwenziwa kwemvelo. Ngenxa yalokhu, ungahle ulungele ukuqala okusha lapho ufuna ukuziqhelelanisa nakho kwakho kwangaphambilini noma ngemuva kohlelo lokuhlanganisa kusuka ebukhweni bakho bobuzwe obedlule igama elisha.
Ukushintshwa kobulili. Empeleni, lesi sizathu siyazikhulumela. Yize kunjalo, kungenzeka ukuthi igama lakho lokuqala njengomphumela alisafanelani nomuntu noma ubulili bakho futhi lidinga ushintsho.
Ungafuna futhi ukuqhelelanisa nenkolo yakho bese ushintsha igama lakho lenkolo lokuqala. Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka futhi ukuthi ngokuthatha igama elijwayelekile lenkolo ofuna ukuqinisa ukuxhumana ngalo nenkolo yakho.
Ukuxhashazwa noma ukubandlululwa. Ekugcineni, kungenzeka ukuthi igama lakho lokuqala noma lele ngane yakho, ngenxa yokupela kwalo, kubangele ukuzihlanganisa okubi noma okungajwayelekile njengoba kuholela emugqeni wokuhlaselwa.
Kumacala ashiwo, igama lokuqala elehlukile lizonikeza ikhambi. Ngaphezu kwalokho, igama lokuqala akumele lingabi elifanele futhi liqukethe amagama okufunga noma lifane nesibongo esikhona, ngaphandle kokuthi lokhu futhi kuyigama lokuqala elijwayelekile.
Ngabe unesizathu esizwakalayo, futhi ufuna ukushintsha igama lakho noma le lengane yakho? Ngemuva kwalokho udinga ummeli. Ummeli uzothumela incwadi enkantolo egameni lakho ecela igama lokuqala elehlukile. Incwadi enjalo yaziwa nangokuthi isicelo. Kuze kube manje, kufanele unikeze ummeli wakho imibhalo edingekayo, efana nekhophi yepasipoti, ikhophi eliyiqiniso lesitifiketi sokuzalwa kanye nokukhishwa kwasekuqaleni kwe-BRP.
Inqubo enkantolo ivame ukwenzeka ngokubhala futhi akudingeki ukuthi uvele enkantolo. Kodwa-ke, ukulalelwa kungenzeka uma, ngemuva kokufunda isicelo, ijaji lidinga imininingwane ethe xaxa ukunquma, iqembu elinentshisekelo, ngokwesibonelo omunye wabazali, elingavumelani nesicelo noma uma inkantolo ibona esinye isizathu salokhu.
Inkantolo futhi imvamisa isethula isinqumo sayo ngokubhala. Isikhathi esiphakathi kwesicelo nesahlulelo sisebenza cishe izinyanga eziyi-1-2. Uma inkantolo inika isicelo sakho, inkantolo izodlulisela igama elisha kumasipala lapho ubhalise khona noma ingane yakho. Ngemuva kwesinqumo esikhishwe yinkantolo, umasipala uvame ukuba namaviki awu-8 wokushintsha igama lokuqala kumininingwane yamarekhodi kamasipala (i-GBA) ngaphambi kokuthi ufake isicelo sikamazisi omusha noma nelayisense lokushayela elinegama elisha.
Inkantolo ingabuye ifinyelele esinqumweni esihlukile futhi yenqabe isicelo sakho uma inkantolo ibheka ukuthi azikho izizathu ezanele zokushintsha igama lakho noma le lengane yakho. Kulelo cala, ungafaka isicelo enkantolo ephakeme kungakapheli izinyanga ezintathu. Uma futhi ungahambisani nesinqumo senkantolo yokudlulisa amacala, kungakapheli izinyanga ezintathu ungacela iNkantolo Ephakeme ngokuxoshwa ukuba ichithe isinqumo senkantolo yokudlulisa amacala. Kufanele usizwe ngummeli kukho konke ukufaka isicelo nokukhalipha.
Ngabe ufisa ukushintsha igama lakho noma le lengane yakho? Sicela uxhumane Law & More. Kuzo Law & More siyaqonda ukuthi ushintsho lungaba nezizathu eziningi futhi isizathu siyahluka kumuntu ngamunye. Kungakho sisebenzisa indlela yomuntu siqu. Abameli bethu ngeke bakwazi ukukunikeza izeluleko kuphela, kepha futhi futhi bakusize ngesicelo sokushintsha igama lokuqala noma usize ngesikhathi senqubo yezomthetho.
Thumela Previous Ukuxoshwa komqondisi wenkampani
Post Next Ukuxhashazwa emsebenzini